Uncedo lwe-Twitter lunokufumana njani amanye amalayenti? - Semalt Inika Impendulo
I-Twitter inokuzisa i-website abaninzi abathengi. Kwi-webmasters ejongene noThengiso lweMidiya yeNtlalo (SMM), unokwenza imizamo eninzi enokuthi ungathethi izithelo. U-Andrew Dyhan, u-8 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, unikezela ukuqwalasela iindlela ezilandelayo apho i-Twitter ingenza i-SEO yakho ibe yimpumelelo:
Qinisekisa imifanekiso, kwaye iividiyo zibonise. Xa wenza i-SEO, imifanekiso kunye nomxholo wevidiyo nazo zinegalelo njengezinto ezikhoyo - hospedaje web barato mexico. Kule meko, kukho iindlela ezininzi apho abantu basebenzisana nomxholo wakho. Ngaphezulu, imifanekiso inokukunceda wenze i-UX yesayithi yakho ibonakale.
Fumana iziphumo ezifanelekileyo zokuphenya. Uhlalutyo olululo lwee-metrics lubangenisa iwebhusayithi yakho ngexesha elifanayo ukwenza ukuba kube nemali eninzi. Ungasebenzisa iziphumo zophando ukwenza i-Twitter ibenze abathengi kwiwebhusayithi yakho.
Umxholo womgangatho kunye nokuthethwa ngawo. Ngamanye amaxesha, abantu bathetha ngokuthandayo kunye namazwana. Kule meko, abantu bangathanda ukulibala ukusebenzisa le nto xa benza i-SEO kwinkampani. Kukho ezinye iindawo zeblogi ezizisa abantu abaninzi kwiwebhusayithi yakho. I-Twitter inokukunceda ukuba wenze ngokuzenzakalelayo le mi sebenzi kunye nokwenza ezi zinto zisebenze kunye.
Yenza imiqhudelwano. Ukwenza imidlalo kwi-Twitter kunokunceda abantu bavelise iinkalo ezininzi zokudala izipapasho..Ngaphezu koko, kunokwenzeka ukubandakanya abaphulaphuli bakho nge Twitter ngokulandelayo. I-Twitter iyithuluzi elinamandla lokuthengisa elo lonke i-webmaster kufuneka liqeshe.
Sebenzisa iblogi. Amandla eblogi ahlala ephezulu kwi-intanethi yokuthengisa. Ukusebenzisa iblogi egunyazisiweyo kunokwenza abantu babe neengxaki kwiinkcukacha abazama ukuzithumela kunye nokwenza utshintsho olufunekayo ukwenza iphulo lakho lesibhengezo liphumelele. Unokudibanisa iblogi yakho kwi-Twitter ngezibonelelo eziphezulu.
Phendula kubaphulaphuli abalungileyo. E-Twitter, abaninzi abantu banokubeka izimvo kwii-tweets zakho ngezizathu ezahlukahlukeneyo. Unokubangela ukuba aba bantu bayeke ukungayithobeli imibono yabantu abangakulungele ukuba ngabaxumi bakho. Ngaphezulu, ibhulogi inokukwazi ukuzisa abalandeli bakho be-Twitter kwindawo enkulu yabantu abazimisele ukuguqula abathengi.
I-Retweet ngokufanelekileyo. I-Retweeting ibonakala iyona nto elula yokusebenzisa i-Twitter ukubeka izimvo. Abantu bakhumbuza iifayile ezivela kwamanye ama-akhawunti ukuze benze abalandeli babo babone ulwazi oluthile. Kubabasebenzisi abafuna ukwenza utshintsho olufunekayo kwimikhankaso yabo yesikhangiso, kubalulekile ukukhupha i-retweet content evela kumthombo onokwethenjelwa, ukwenza yonke inkqubo iyingqayizivele.
Okwangoku, abantu abaninzi baninzi basebenzisa i-Twitter ukuthumela i-SEO kunye nemisebenzi yokuthengisa (Content). Kwezinye iimeko, abantu basebenzisa inkqubo yokuvakalisa ukufikelela kwizigidi zabaxhasi kuwo wonke umhlaba. Uninzi lwazo luncedo ekwenzeni iikhankaso ezinkulu zesikhangiso. Kukho ezinye iindlela ezenza ii-webmasters ekufinyeleleni abaphulaphuli babo. Ungayisebenzisa le khokhelo ukwenza i-SEO yakho okanye iSmmp campaign iphumelele. Ngaphezulu, i-Twitter inokunceda iintengiso zakho zivelisa abathengi abaninzi kwiwebhusayithi yakho.